24 घण्टामा श्रीमानको मृ*त्यु हुनेपक्का थियो, श्रीमतीले भनिन कि म बच्चा चाहन्छु, त्यस्तो कुरा सुनेर सबै जना छ*क्क परे! – Kavrepati
Home / समाचार / 24 घण्टामा श्रीमानको मृ*त्यु हुनेपक्का थियो, श्रीमतीले भनिन कि म बच्चा चाहन्छु, त्यस्तो कुरा सुनेर सबै जना छ*क्क परे!
admin September 21, 2021	समाचार Leaveacomment 278 Views
विवाह पछि एक महिलाको लागि उनको पति सबै कुरा हो। उनी आफ्नी सुन्दर जीवन उहाँसँगै बिताउने र परिवारलाई अगाडि बढाउने सपना देख्छिन्।
तर कहिलेकाँही यस्तो दु: ख पनि आउँछ जब पति बच्चा जन्माउन अघि नै मर्दछ। गुजरातको बडोदरामा एउटी आइमाईलाई पनि त्यस्तै भएको छ।
कोरोनाका कारण महिलाको पति गत दुई महिना देखि भेंटिलेटरमा थिए। उसको फोक्सो एकदमै खराब भैसकेको थीयो। डाक्टरहरूले पनि हात उठाए। उनले बिरामीको स्वास्नीलाई भने कि तपाईको लोग्नेको अब केहि दिन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा, श्रीमतीले आफ्नो पतिको अन्तिम चिह्न आफ्नो गर्भमा राख्ने निर्णय गरे।
वास्तवमा, महिला आफ्नो पतिको मृत्यु हुनुभन्दा अघि उनको बच्चाको आमा बन्न चाहन्थिन्। यो एक असम्भव काम थियो। महिला २४ घण्टा बाँकी थियो।महिला को कुराले सबैलाई चकित पार्यो। यो अनौंठो प्रेम कहानी विस्तृत रूपमा थाहा पौनुहोस।
यस प्रेम कहानीको सुरुवात आज भन्दा चार बर्ष अघि क्यानाडामा सुरु भयको थीयो। जहा केटा र केटी भेटिए र प्रेममा परे। यस पछि, दुबै अक्टोबर २०२० मा बिहे भयो। विवाह भएको चार महिना पछि महिलाको ससुराको स्वास्थ्य अचानक बिग्रियो। यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो पतिसँग वडोदरा आई। यहाँ ती महिला र उनका पतिले ससुराको हेरचाह गर्न थाले। यद्यपि यस समयमा महिलाको पति पनि कोरोनाको नियन्त्रणमा आए।
पतिलाई उपचारका लागि मे १० मा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर उसको अवस्था खराब हुन थाले। उनले दुई महिनासम्म जीवन र मृत्युको लागि स .्घर्ष गरे। उसको फोक्सोले काम गर्न छोडीसकेको थियो।
डाक्टरहरूले आइमाईलाई भने कि तपाईको लोग्नेमान्छे तीन दिन मात्र छ। यस्तो अवस्थामा, महिला डाक्टरहरूको अगाडि एउटा अनौंठो मांग राखिन्। उनले भनिन् कि उनी आफ्नो लोग्नेको शुक्राणु चाहान्छिन् ताकि भविष्यमा उनले बच्चा जन्माउन सकून्। यो उनको पतिको अन्तिम चिन्ह हुनेछ।
डाक्टरहरूले महिलाको प्रेमप्रति सम्मान व्यक्त गरे र भने कि मेडिकलको कानूनी ऐन अनुसार पतिको अनुमोदन बिना शुक्राणु नमूना लिन सकिदैन। यस्तो अवस्थामा, उक्त महिला गुजरात हाईकोर्टमा मुद्दा हाल्न गई। महिलाको पतिसँग यो सबै गर्न केवल २४ घण्टा बाँकी थियो।
उक्त महिलाले सोमबार साँझ हाईकोर्टमा निवेदन दिएका थिए र दोस्रो दिन तत्काल सुनुवाईको लागि अनुरोध गरेकी थिई। यस पछि, जब यो कुरा उच्च अदालतको दुई सदस्यीय पीठ समक्ष आयो, तिनीहरू पनि छक्क परे, यद्यपि छक्क परे तिनीहरूले मात्र 15 मिनेटमा उक्त महिलाको हितमा फैसला दिए।
न्यायमूर्ति आशुतोष जे। शास्त्रीले श्रीमतीको निवेदनमा तुरुन्त सुनुवाइ दिए र गम्भीर संक्रमण भएका महिलाको पतिको नमूना स of्कलन गर्न निर्देशन दिए IVF असिस्टेड प्रजनन टेक्नोलोजी (एआरटी) प्रक्रियाका लागि। अदालतले मानवीय आधारमा छिटो यो निर्णय दियो। अर्कोतर्फ, सासुले पनि महिलाको यस निर्णयलाई समर्थन गर्‍यो।
Previous सुन्दर नर्स करुणा यस्तो बिरामी, भन्छीन “जिन्दगीको कुनै टुङ्गो हुदैन”-हेर्नुहोस (भिडियो सहित )